Gareen Obboleewwan Muslimoota Masrii hiriira nagaa guddaa waame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Gareen Obboleewwan Muslimoota Masrii hiriira nagaa guddaa waame
Gareen Obboleewwan Muslimoota Masrii hiriira nagaa guddaa waame
Mootummaan hiriirichi bittinsuudhaaf qophii hunda xumurate
Warri Obboleewwan Muslimootaa ‘Akhwaan Al-Muslimuun’ bara dabre humna wooraa Masriitin (Al Siisiin) aangoo bulchiinsa biyya Masrii irraa ari’ame Sadaasa 28/2014 mormii guutuu biyyaatti keessatti godhuuf qophii xumurachuu isaa ibse. Hiriira mormii waamame kana gareen Adda Salafii ‘Salafi Front’ jedhamus qooda keessaa qaba.Hiriirri nagaa kuni kan ta’u magaalota gurguddoo biyyattii hunda keessatti guyyaa Jimaataa salaata Jum’aa booda. Angawwoonni Obboleewwan Muslimootaa ‘Muslim Brotherhood’ hirmaattonni hiriira nagaa hundi Qur’aana harkatti qabachuudhaan akka hiriira irrati hirmaatuuf deeman ibseera. Hiriirri kunis dhadanno, ‘islaamummaan haadursutu ” jedhu jalatti kan geggeeffamu.
Murtee Obboleewwan Muslimootaa kana hordofee mootummaan Al Siisiis ibsa baasee jira. Akka ibsa Muhaammad Ibraahim (Ministera Dhimma Biyya Keessaa) fi Sidqiin Sobhii (Minstera Ittisaa) woliin baasanitti hiriirri guyyaa 28/2014 geggeeffamuuf karoorfame kuni seera qabeessaa miti. Kanniin hiriiricha irraa qooda fudhachuf deemaniifis akeekkachiisa guddaa dabarsaniiru, akka ibsa saba himoota addaddaatiif kennanitti. Miseensonnii fi deeggartoonni garee kanniinii akeekkachiisa mootummaan kenne cabsanii hiriira bahan taanaan mootummaan isaan fundura dhabbachuuf qophii ta’uu isaati kan ministeroonni kuniin akeekkachiisan. Muhaammad Ibraahim, ‘waa cufatti dhimma baana,’ qawwees dabalatee, ‘jeequmsa ka’uu malu dhaabudhaaf’ jedha.
Ministerri Ittisaa, Sidqiin Sobhii, waraana kumaatamaan lakkaawamu magaalaalee gurguddoo Masrii hunda keessa bobbaasuu dubbata. Kuni hundi sodaa mootummaan hiriirri nagaa kuni gara hookkaraatti geeddaramuu nidanda’a jedhu irraayi.
Gara biraan, muftiin ol-aanaan biyya Masrii Qur’aana of harkatti qabatanii hiriira bahuun akka seera ‘Shari’aa’ islaamaatti dhorgaa tahuu ibsee. Itti dabaluudhaanis, warreen hiriira kana qopheessaa jiran rakkoo hiriira kana irraa madduu maluuf ammumaa itti gaafatamummaa fudhachuuf akka ufqopheessaniidha kan hubachiisan.
Hiriiruma godhamuuf deemu kanaan wolqabatee, gareen Al-Nuuris deeggartoonni isaa akka hiriira kana irraa qooda hinfudhanne akeekkachiiseera.
Keessa bettonni haalaa warraa Obboleewwan Muslimootaa ‘Ikhwaana’ Masrii akka dubbataa jiranitti, garee ‘Akhwaana’ halellaan hedduun mootummaarraa waan isa dhaqqabaa tureef hiriira Sadaasa 28/2014 kana itti milkaawuun isaa kan jabaatu ta’uu dubbatu.
Akkuma yaadatamuu erga warri Muhaammad Mursii aangorraa ari’amanii biyya Masriitti dhiimi nageenyaa fi tasgabbii rakkoo guddaa ta’ee jira.
Gumaachaan Hegeree Oromiyaa
Previous articleTaphootaa Liigii Shaampiyoonaa Awrooppaa geggeeffameen Arsenaal, Cheelsii, Baarseloonaa, Riyaal Maadriid fi Siitiin injifatan. Li’oneel Messiin ammas abbaa rikoordii haarawaati
Next articleTalaalliin Iboolaaf fala ta’uu mala jedhame argame